Sidee u dhici kartaa in natiijooyinka SERP mar walba ka duwan yihiin?
Aniga ahaan, waxaan la kulmay dhibaatadan marka dib loo eego natiijooyinka SERP ee loogu talagalay ereyada muhiimka ah ee qalabka raadinta. Haa, taasi waxay ahayd arrin la yaab leh, waa inaan qiraa. Xitaa in badan - Waan ka naxay sababta natiijooyinka Google SERP ay u kala duwanaan karaan, gaar ahaan marka la barbardhigo wax kasta oo qiyaaso ah oo ay bixiyaan dad kor u-kiciyay. Dabcan, waxaan fahamsanahay in gaadiidkayga nooca dabiiciga ah uu aad uga culus yahay wixii aan arki lahaa bogga natiijooyinka raadinta raadinta - umzug transport kostenec. Sidaa daraadeed, aan aragno sababta natiijooyinka Google SERP ay had iyo jeer ka duwan yihiin. Halkan waxa ku yaal talooyin macquul ah oo ku saabsan:
Shakhsiyaadka loo qoondeeyay natiijooyinka
Guud ahaan raadinta aduunka ayaa loo yaqaanaa inay muujiso natiijooyinka SERP iyadoo lagu salaynayo ugu dambeyntii isticmaalaha taariikhda iyo astaamaha caadiga ah ee dhaqanka si ay u bixiyaan natiijooyin shakhsiyadeed oo si gaar ah loogu talagalay inay ku haboonaadaan baahiyo kasta oo user iyo ujeedo. Taas macnaheedu waa in hawlahaaga koontadaada Google, taariikhda booqashada, iyo sidoo kale ka qeyb qaadashada warbaahinta bulshada (wadaagidda, jecel, faallaynta, ciyaaraha videogaada YouTUbe, iibsashada badeecooyinka ama adeegga laga helo bogga gaarka ah).
Dabcan, haddii aad ubaahan tahay inaad la socoto tirakoobka dhabta ah, waxaad isticmaali kartaa qaar ka mid ah qalabyada internetka ee gaarka ah si aad u hesho macluumaad sax ah. Waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale ka saarto koontada Google, oo aad gasho khaas ah (a. k. a, incognito) habka browser ah.
IP address iyo geolocation
Shaki kuma jiro, meesha aad hadda haysatid waxaa loo tixgeliyaa raadinta shakhsiga Google. Isla mar ahaantaana, cinwaankaaga dhabta ah ee IP ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa si loo go'aamiyo goobta raadintaada. Muujintan waxaa lagu sameeyaa ugu fiican markaad buuxinayso codsi raadis ah oo leh su'aal sida "aniga igu dhow". Isku day inaad sameyso raadin sidan oo kale ah. Habkaas, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa xalka ugu sareeya ee VPN ama Google VP si loo tijaabiyo sida ay u shaqeyso.
Waxaan halkaan kugula talineyaa adigoo isticmaalaya qalab isku mid ah maalin kasta oo booqasho maalinle ah iyo baaritaano marmar ah oo leh darajo taxane ah. Sida cad, natiijooyinka SERP dhaqdhaqaaqa marwalba waxay ka duwan tahay midda asalka ah ee asalka ah. Dhamaan waxaad u baahan tahay in la xasuusto waa SEO-ga maxalliga ah ee hadda la keenay heer calaamad cusub oo muhim ah oo loogu talagalay moobillada internet-ka ah ee mobile-ka ah, iyo sidoo kale inta kale ee bogagga ku ordaya hoosta AMP. Waxyaabaha kale ee wadista natiijooyinka SERP
Ugu horreyntii, hubi goobaha aad raadineysid, sida ay qabaan
saameyn la ogaan karo qiimeynta raadinta kuwaas oo aan marnaba la tixgelinin aaladaha muhiimka ah ee liiska keydka. Waxaan u jeedaa halkan in ay jiraan fursado raadin kala duwan oo aan caadi ahaan dooranay hal mar, sida websiteyada naftooda, khariidadaha, sawirrada, fiidiyoowga, iyo wixii la mid ah.
Waxyaabaha xigta ee wadista SERP waa waqtiga dhabta ah ee raadintaada hadda. Tusaale ahaan, waxaa jira codsiyo aad u xasaasi ah sida arrimaha caalamiga ah, saadaasha hawada, ama jebinta wararka. Codsi kasta oo raadin ah sida kuwa waxaa badanaa la badiyaa maalintiiba mar.
Ka dib oo dhan, ha ilaawin Google ee samaynta isku dheelitirnaanta xarumaha xogta aduunka oo dhan. Makiinadda raadinta waxay ku tiirsan tahay xarumo fara badan, taasina waa sababta ay u socodka xogta isbarbar-dhigista badanaa la kulmaan dib-u-dhac wayn. Taasi waa sababta mararka qaarkood waxaad arki kartaa natiijooyin aan caadi ahayn oo loogu talagalay ereyada isku midka ah, maadaama ay jiri karto xogo kala duwan oo laga yaabo in ay wali sii socdaan si loo jadwaliyo.